Faahfaahin: Qarax Khasaare Geystay oo Ka Dhacay Hiiraan. – Shabakadda Amiirnuur
December 11, 2018 3:21 am by admin Views: 46
Wararka naga soo gaaraya gobolka Hiiraan ee dhaca adhtamaha Soomaaliya ayaa sheegaya in qarax lala beegsaday ciidamo iyo saraakiil ka tirsan Hirshabelle kuwaasoo si gaar ah ula shaqeynayay Itoobiyaanka ku sugan degmada Maxaas.
Meel isku imaatin ah oo ay ku sugnaayeen ayaa waxaa mar qura ka kacay qarax kaasoo sababay khasaare, waxaana ku dhaawacmay lix ruux oo isugu jira Saraakiil iyo ciidamo.
Labo kamid ah dhaawacyada ayaa lasoo warinayaa iney xaaladdoodu aad u liidato gaar ahaan sarkaal magaciisa lagu soo koobay Af-weyne oo ay lug ka go’day.
Goob joogayaal ayaa ku waramaya in aanan si degdeg ah loogu gurman dhaawacyadan sababo la xiriira iyadoo laga baqanayay inuu qarax kale ka dhoco goobta oo ahayd meel ay aalaaba ciidamada iyo saraakiishu ku qayilaan (Qaadka ku cunaan)
Gudoomiyaha degmada Maxaas ayaa usbuucii lasoo dhaafay cabasho xooggan ka muujiyay qaraxyada Al-Shabaab xilli uu la hadlayay idaacadda codka Mareykanka kana war bixinayay duqeyn ay degaanka ka geysteen dayuuradaha Xabashida.